Umgangatho ophezulu weplastikhi yokunyathela iAluminium - China Aluminium Checkered Plate Tread Abavelisi, abaxhasi
I-Aluminium Plate ye-Aluminium 3003-H22 kulula ukuyila kwaye ipateni yayo yedayimani ephakanyisiweyo ibonelela ngokuxhathisa kwesiliphu kunye nozinzo lokuhamba. Ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kweAluminiyam yedayimani yokunyathela ipleyiti eyi-3003-H22 eqaqambileyo zezi: ukusetyenziswa kwemveliso okuninzi njengeepleyiti zescuff, iibhodi ezibalekayo, kunye nodaka kwiinjini zomlilo, iiambulensi, iilori zomlilo, iinqwelana ezirhuqwayo kunye neebhokisi zezixhobo, ezolonwabo kunye nezithuthi ezihamba ngamavili amane.
Iipleyiti zokutshekisha / ukunyathela iphepha lealuminium elinoyilo olwahlukileyo kunye nokumelana nesiliphu ngokulula kunokuqwalaselwa ngokulula kuyilo olwahlukeneyo kunye neepateni ngokweemfuno zomthengi. Amacwecwe eAluminiyam atshekiweyo anokubonelelwa ngeendlela ezahlukeneyo zeemveliso ezigqityiweyo kubandakanya iipleyiti zedayimani, iipleyiti zealuminiyam, iipleyiti zokunyathela kunye nokunyathela izitepsi.
Ukuba nokwakha okuhle, ukubhola kunye nokudibanisa i-welding, i-Aluminium ye-Diamond Plate kulula ukuyila kwaye iphethini yayo ye-diamond lug iphakamisa ukuxhathisa. Ngoku sigcina ubungakanani obukhethiweyo kwi-FTQ okanye kwiPlanti yeDreyini yoMlilo kwiDayimani yePlate enee-grooves ezixhonywe phezulu kwidayimani ukuze zongezwe.
Iinkcukacha zePaneli yeAluminiyam
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabantu abakwiindidi ezahlukeneyo zezakhiwo, uyilo lwamakhonkco ealuminiyam nalo lwahlukile. Ukongeza kwimibala eyahlukeneyo yokupeyinta ialuminium, kukho nezinye iindlela ezininzi zonyango lweepaneli zealuminium ezithengiswayo.
Iphaneli yokudityaniswa kwealuminiyam ye-Acp yeyona nto ibalulekileyo yokwakhiwa kwealuminium. Njengohlobo olutsha lweepaneli ze-aluminium zokwakha, ixabiso le-aluminium yokubopha ixabiso liphantsi, imibala yepluminiyamu edityanisiweyo iyahluka, kwaye le nto ikwanokusebenza okuhle kakhulu. Okubaluleke ngakumbi, ibhodi edityanisiweyo yealuminium inokumelana kakuhle nomlilo kunye nomgangatho obalaseleyo.
IBakala loRhwebo Ipleyiti yeAluminiyam enikezelwa ngohlobo loBukhulu obahlukeneyo, iZicelo ezahlukeneyo. Ilungele iKhaya okanye iOfisi, kunye nolwakhiwo, abavelisi abenziweyo, inqanaba leengxubevange ezahlukeneyo ezikhoyo
Iphepha leDayimani yokuNyathela iSlip-Resistant Aluminium Sheets
Uthotho lwe-1000 aluminium alloy yaziwa ngokuba yi "aluminium esulungekileyo yemizi-mveliso", enezona ndawo zisetyenziswa kakhulu kwiindawo ezininzi, ezinje ngemizi-mveliso, uyilo, izakhiwo zokuhombisa, ulwandle, iinqwelomoya, njl. ukuqhuba kakuhle kombane. Indlela yokuchongwa kwealuminiyam ininzi kwaye inokwenziwa ibrashi, ipolishe, ishicilele, igalelwe, icinezelwe, idityaniswe okanye ezinye iimveliso zealuminium.
Ukugqwesa ukugquma kweAluminium Plate Metal
Ipleyiti yokunyathela iAluminiyam inokusetyenziselwa uluhlu olubanzi lokwakha kunye neenjongo zokwakha. Oku kungenxa yokuba ayisindi, yomelele, iphantsi yomgangatho wolondolozo. Amacwecwe eAluminiyam Iphaneli yesinyithi yokukhanya enobunzima obusetyenziselwa iipaneli zokuhombisa yoyilo.